Kaftanka Madaxweyne Donald Trump ee dadka ka yaabiyay - BBC News Somali
Kaftanka Madaxweyne Donald Trump ee dadka ka yaabiyay
Trump ayaa horay u ballan qaaday in uu derbi ka dhisi doonaa xadka Mexico
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa dad badan ka yaabiyay, kadib markii uu meel fagaara ah ka sheegay in xukuumadiisa ay derbi ka dhiseyso gobolka Colorado oo ku yaala bartamaha dalka Mareykanka.
Madaxweyne Trump ayaa mar uu ka hadlayay ammaanka xuduudaha Mareykanka hadalkan maalin kahor ka sheegay shir uu kaga qeybgalay Magaalada Pittsburgh.
Arrintan ayaa ka yaabisay dad badan oo fahmi waayay waxa uu ula jeedo Madaxweynaha, maadaama gobolka Colorado uu ku yaalo bartamaha Mareykanka, oo uusan ku oolin meel xuduud ah, waxaana ay keentay jahwareer ku saabsan hadalka Trump.
"Ma ka warqabtaan in aan u socono Mexica da cusub? waxaan derbi ka dhisayaa Colorado, sababtoo ah waxay rabaan in xadkooda uu ammaan noqod oo aysan iminka heysanin", ayuu yiri Trump.
Wuxuu Madaxweyne Trump intaa ku daray : " Waxaan dhiseynaa derbi qurux badan oo shaqeeya, cidnana aysan ka soo dusi karin kor iyo hoosba, waxaa kale oo aan derbi ka dhsieynaa Texas".
Sidoo kale hadalka Trump ayaa hadal heyn ka dhaliyay baraha bulshada, oo waxay dadka qaar moodeen in Madaxweynaha uu markale doonayo in uu darbi ka dhiso halkaas.
Derbiga xadka Mexico iyo Mareykanka
Hasayeeshee Trump ayaa markale arrintan kaga hadlay bartiisa Twitter, oo waxa uu ku soo qoray hadal u muuqday in uu wax ku saxayo.
"Waan idin ku ciyaarayay, oo wax derbi ah oo aan ka dhiseyno Colorado ma jiraan , balse waxaa ay heli donaan faaidada derbiga aan ka dhiseyno xadka", ayuu ku qoray bartiisa Twitter-ka.
U qaabilsanaha dowladda Mareykanka ee arrimaha ilaalinta xuduudaha iyo kastanka, Mark Morgan, ayaa horantii bishan qiray in dhamaan 114 kilomitir ee ay xukuumadda Trump ka dhistay xadka Mexico iyo Mareykanka uu yahay dhisma cusub oo ah derbi ku teedsan xadka.
Arrintan ayaa ka dhigan in xukuumadda Trump ay dhistay derbi cusub, oo aysan cusbooneysiinin kii hore halkaas uga dhisnaa.
Xukuumadda Madaxweyne Trump ayaa ku hawlan sidii 650 kilomitir oo derbi ay uga dhisi lahayd xadka Mexico, marka la gaaro dhamaadka sanadka 2020, taas oo qeyb ka ahayd waxyaabihii ololaha uu ku galay Trump ee lagu doortay.